तपाईलाई गोरो हुने मन छ ? घरेलु ३ सरल र अदभुत उपायहरु जसले तपाइको अनुहारनै परिवर्तन गरिदिन्छ » खबरहरुको एउटै केन्द्र
मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १५:२१ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ ,टिभी, पत्रिका अनि रेडियोमा हामीले धेरैजसो गोरो र चम्किलो छालाका लागि आएका कसमेटिक्स सामानहरुका विज्ञाजन देख्दै अनि पढदै सुन्दै आएका छौ । के सुन्दरता त्यती महँगो छ त ? परापुर्वकालमा अदभुत सुन्दरिहरु यी व्यवसाहीक अनि प्रशोधीत उत्पादन बिनानै के कारणले त्यति सुन्दर थिए त ?
नोट: “माथि उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो । यी बिषयवस्तुहरु केवल जानकारीको लागी मात्र यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ। कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धि टिप्सहरु प्रयोग गर्नु भन्दा पहिला अनिवार्य रुपमा चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोला।
PREVIOUS POST Previous post: आईपिएल :बैंगलोरलाई झट्का ! सबैभन्दा महत्वपूर्ण खेलाडी नै खेल्न नसक्ने
NEXT POST Next post: तलब नपाए पछि पत्रकार आन्दोलित
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १५:२१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १५:२१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १५:२१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १५:२१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १५:२१